Nhau - Kugadzira Machining
Kugadziriswa kwemuchina kwakajairika uye kwese-kunosanganisira maitiro echikamu. Iyo yekugadzirisa michina inotaurwa pano inoreva chaizvo nzira dzekugadzirisa dzinoshandiswa mune yekurapa maitiro kurapwa. Iko kune chikamu chinopindirana neyekugadziriswa kwemuchina mu "Kugadzira Maitiro", uye unofanirwa kutarisa mutsauko.
Kune akawanda marudzi emachina. Tsika dzekugadzirisa nzira hadzisi chinhu kunze kwekutendeuka, kugaya, kuronga, kukuya, kubaya, kucheka, kuchera, nezvimwe. Dzakawanda dzenzira dzechinyakare dzinoverengerwa pashoma nepashoma uye nemhando dzemazuva ano dzeCCC machining nzvimbo. Dzimwe nzira nyowani dzehunyanzvi dzinowedzerwa zvishoma nezvishoma. Iyo nzvimbo yebhuku iri ishoma, saka handizo nyora zvese pano. Ini ndinongoburitsa iwo matekiniki anobatanidzwa mukugadzira maitiro nevakagadziri, senge sandblasting, kudhirowa newaya, kupora, kutsika, uye kutenderera.
Hunhu hwokugadzira michina hunogona kupfupikiswa se: kumhanya, kuita kwakanyanya uye nemhando yepamusoro.
Kune akasiyana machining maitiro maitiro, iwo akasiyana maitiro anoratidzwa mune inotevera tafura:
Inogona kuve yakasarudzika yakasarudzika pakati peakasiyana hukasha, kuti uwane kwakasiyana kweiyo nzvimbo yekushandira
Inogona kudzora kumeso kusagadzikana kweiyo workpiece, uye kuwana yakajeka kana girazi gloss
Iyo inogona kugadzirisa chero yakakwira-simba, yakakwira-kuomarara, yakakwira-kuomarara, yakakwira-brittleness uye yakakwira-yakachena inoitisa zvinhu; hapana chakajeka michina simba panguva yekugadzirisa, uye inokodzera kugadzirisa yakaderera-kuomarara workpieces uye akanaka zvimiro
Izvo hazvigone chete kungochinja epakutanga echimakanika pateni kana pamusoro kushomeka, mushe kuvhara michina pateni uye chakuvhu clamping kuremara mukugadzira, asi zvakare ine yakanaka chitarisiko kushongedza maitiro
Simbi, girazi, zvedongo
Simbi, zvedongo, girazi
Conductive zvinhu zvakadai simbi
Simbi, acrylic, PC, PET, girazi
Sandblasting inzira inoshandisa yakamanikidzwa mweya kana mvura kutyaira zvakaoma zvikamu kuti ubate pamusoro peiyo workpiece nenzira yakagoverwa kuti uwane kuchena kana hukasha. Zvinoshanda zvinoshanda sekubvisa ngura, peeling kupfeka, kuchenesa, nezvimwe hazvizokurukurwa pano. Iko kunyorera mukuonekwa tekinoroji kunonyanya kukurukurwa pano. Iyo general sandblasting maitiro inoshandiswa kugadzira matte / matte / jecha pamusoro.
Sandblasting inogona kuiswa pamusoro peanenge ese emabasa ekugadzira anosanganisira epurasitiki, simbi, girazi, ceramics, nezvimwewo, asi chinonyanya kushandiswa mukugadzira kwakawanda ndiko kutaridzika kwesandblasting kwesimbi yekugadzira, kunyanya simbi isina simbi uye zvigadzirwa zvealuminium.
Dhizaini yewaya ingangove yeimwe yakajairika simbi yekushongedza maitiro. Iyo yekudhirowa maitiro inogona kuoneka pane simbi, kunyanya isina simbi simbi, ceramics uye zvigadzirwa zvepurasitiki.
Dhizaini yewaya inowanzo sanganisira kukuya chaiko, CNC yekuveza uye laser, nezvimwewo mhedzisiro inowanikwa nenzira dzakasiyana dzekugadzirisa zvakare dzakasiyana, uye mutengo wakasiyanawo.
Kutenderera, kunonziwo kuruka, chiito chekare kwazvo. Knurling banga rinoshandiswa kuwedzera yakatwasuka kana net-senge zororo mapuratifomu pamusoro peiri cylindrical simbi workpieces kuwedzera kukakavara uye kufambisa mashandiro. Nekudaro, nezvido zveveruzhinji zveaesthetics, iyo aesthetics yeiyi nzira yakawedzera zvishoma nezvishoma, uye iro rekushongedza basa rezvimwe zvigadzirwa rakakura kupfuura iro rinoshanda basa.
CNC achiita zvokutemera
CNC yekuveza ndiko kushandiswa kweCNC yekutendeuka uye kunyora pamusoro penzvimbo yebasa. Iyo brushed uye CD mapatani anogadzirwa akachena, akarongeka uye akajairwa. Iri bhuku rinodaidzwa kunzi maitiro. Uye zvakare, CNC yakatemerwa machira anogona zvakare kudzora kudzika kuburitsa zororo mhedzisiro.
Kukwenenzvera kunoreva kushandiswa kwemakanika, kemikari kana emagetsi makemikari kudzikisira kumeso kweiyo nzvimbo yekushandira kuti uwane yakajeka uye inotsvedzerera pamusoro. Iko kushandiswa kwekupukuta maturusi uye hasha zvikamu kana imwe polishing midhiya kugadzirisa pamusoro peiyo workpiece.
Mechanical makorari inzira yekupolisha inovimba nekucheka uye kupurasitiki deformation yezvinhu pamusoro kubvisa iyo yakabwinyiswa convex zvikamu kuti uwane kumeso pamusoro. Kazhinji, matombo emafuta emafuta, mavhiri emvere dzemakwai, sandpaper, nezvimwe zvinoshandiswa, uye mashandiro emawoko ndiwo makuru.
Iyo yekupedzisira-yakanyatsoita polishing nzira inogona kushandiswa kune yakakwira yepamusoro mhando zvinodiwa. Ultra-chaiyo polishing ndiko kushandiswa kweanokosha hasha maturusi, ayo akamanikidzwa kupesana neyakagadziriswa pamusoro peiyo workpiece mune yekukorobha mvura ine abrasives yekumhanyisa-kumhanya kutenderera. Uchishandisa iyi tekinoroji, iyo yepamusoro roughness yeRa0.008μm inogona kuzadzikiswa, inova yepamusoro-soro pakati penzira dzakasiyana siyana dzekukorobha. Iyi nzira inowanzo shandiswa muo lens lens molds.
Fluid polishing inovimba neiyo-yekumhanyisa inoyerera mvura uye hasha zvikamu zvinotakurwa nazvo kushambidza pamusoro peiyo workpiece kuti uwane chinangwa chekupora. Nzira dzinowanzo shandiswa ndedzinoti: hasha jet kugadzira, mvura jeti kugadzira, hydrodynamic kukuya uye zvichingodaro.
Kukuya kweHydrodynamic kunotyairwa ne hydraulic kumanikidza kuita kuti svutugadzike yepakati yakatakura zvimedu zvine hasha zvinoyerera zvichidzoka pamusoro penzvimbo yebasa nekumhanyisa. Iyo yemvura svikiro inonyanya kugadzirwa neakakosha makomputa ane akanaka kuyerera pasi pezasi kumanikidza uye akasanganiswa neabrasives. Iyo abrasives inogona kugadzirwa nesilicon carbide upfu.
Magnetic kukuya uye kukwiza
Magnetic hasha kukwesha ndeye kushandisa magineti abrasives kugadzira mabrasive mabrasive pasi pechiito chemagineti kugaya iyo workpiece. Zvakanakira ayo akanyanya kugadzira kunyatso, mhando yakanaka, kudzora kuri nyore kwekugadzirisa mamiriro uye yakanaka yekushanda mamiriro. Uchishandisa akakodzera mabrasives, iyo yepamusoro roughness inogona kusvika Ra0.1μm.